भर्खरै विवाह गरेकी काजल अग्रवाललाई छ यस्तो रोग, म लजाउँदिन भन्दै गरिन् यस्तो खुलासा – Online Nepalaja
तर विस्तारै आफु यस कुरामा अभ्यस्त भएको पनि उनको भनाई छ । उनलाई यात्रा गर्दा धुँवा धुलोजस्ता चिजले अत्यधिक त ना वमा पार्ने गर्छ । त्यती बेला उनले इन्हेलरको प्रयोग गर्ने गरेको बताएकी छन् ।
इनहेलरको महत्व बुझाउँदै उनले थपिन्, ‘म आफैंले परिवर्तन भएको महसुस गरेकी छु । इन्हेलरको प्रयोगले मैले असाध्यै आराम महसुस गरेँ । तपाईंले यसको प्रयोग गर्न लजाउनु पर्दैन ।
Prevघोर अचम्म : सिन्धुपाल्चोकमा दियो गोरुले दूध, चिकित्सक चकित ! [दुध खान देशभरीका पुग्न थाले]
Nextआज सुनचाँदीको कारोबार गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? थाहा पाउनुस् आजको मूल्य
मृगौला खराब हुनुभन्दा पहिले शरीरले दिन्छ यस्तो संकेत, भूलेर पनि नगर्नुहोस् इग्नोर